Please help - Non system disk or disk error - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Please help - Non system disk or disk error
ကျွန်တော် CPU အပြား ပြန်တက်လိုက်တာ .. အခုလို message ပေါ်နေလို့ ပါဗျာ
Non-system disk or disk error ပေါ်ပြီး ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့ မ၇လို့ ပါ..
window ပြန်တင်၇မလား ခင်ဗျ.. တင်၇မယ်ဆိုလဲ နည်းလမ်း ညွှန်ပေးပါ ခင်ဗျာ..
သို့ မဟုတ် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြန်ပြင်၇မလဲ ဆိုတာ ပြောကြပေးပါ ခင်ဗျာ
ပြန်စာ - Please help - Non system disk or disk error
CPU ပြန်မတပ်ခင်မှာ Thermal Grease ခြောက်နေတာမျိုး၊ မရှိတော့တာမျိုး ဖြစ်နေရင် Thermal Grease တစ်ဘူးလောက်ဝယ်ပြီး နဲနဲထပ်သုတ်ပေးပါ။ တစ်ဘူးကို ရန်ကုန်မှာဆို ၁၀၀၀ လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ပန်းဆိုးတန်းက ကွန်ပြူတာဆိုင်တော်တော်များများမှာ ဝယ်လို့ရတယ်။ CPU ပြန်တပ်ရင် Motherboard ပေါ်မှာ သေချာအထိုင်ကျအောင် နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်အောင် စစ်ဆေးပြီး တပ်ပါ။ Heat Sink နဲ့ Fan ကိုလည်း Motherboard ပေါ်မှာ သေချာတွယ်မိ မမိစစ်ပြီး ဆွဲကြည့်လိုက်ရင် လှုပ်မနေတာ သေချာပါစေ။ Non-system disk or Disk Error ဆိုပြီး ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Hard Drive နဲ့ Motherboard ဆက်ထားတဲ့ ကြိုးတွေ လွတ်နေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ခေါင်းတွေ သေချာပြန်စစ်ပြီး ထိထိမိမိတပ်ပါ။ တစ်ခြားပြဿနာတွေ ရှိနေသေးရင် ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ရာတွင် စဉ်းစားနိုင်သည့်အချက်များ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဆက်စပ်လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးWindows မတက်တာဆိုရင်တော့ Repair မလုပ်တတ်ရင် Reinstall ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ Windows အမျိုးအစားကို Google မှာ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ရိုက်ပြီး ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, ဇာနည်စိုး, လီယိုနာဒို, ကျော်ကျော်မောင်, နွေဦးကံကော်, PyaitSone, tu tu, unique
microsoft က resolution လုပ်ထားတာကို ပြန်ရေးပေးလိုက်တာပါ။
အခု မှ စပြီးဝင်ရေးဖူးတာမလို့ အမှားပါရင်..နားလည်စေချင်ပါတယ်။ Thanks
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ nightman1190 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
PyaitSone, tu tu, unique
ညီလေး.......အဲ.ဒါက စီပီယူနဲ.မဆိုင်ပါဘူး......တကယ်လိုညီလေးပြန်ဖြုတ်လိုက်လို.မော်နီတာပေါမှာဘာမှပေါမလာဖြစ်မယ် ဒါဆို၇င်စီပီယူနဲ. မန်မို၇ီ ကြောင်လို.ပြောလို.၇တယ် မန်မို၇ီဖြုတ်လဲလို.မှစာပေါမလာသေး၇င်တော. စီပီယူကြောင်.ပါ.....အခုဟာာကညီလေး၇ဲ.ဟက်ဒ်ဟာာ...ကြောင်နေတာဖြစ်နိုင်သလို အချိန်ကြာလာလို.မကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်......စီပီယူကိုဖြုတ်တယ်ဆိုတော. ကွန်ပြူတာတစ်ခုလုံး၇ဲ.ကေဘယ်ကြိုးတွေကိုဖြုတ်၇မှာပါ ဒါကြောင်.ကေဘယ်တွေကိုသေချာပြန်စစ်ကြည်.ပါ...အားလုံးကောင်းတယ်ဆို၇င်တော......ဟက်ဒ်ကြောင်.လို.ယူဆလို.၇ပါတယ် ...... ၀င်းဒိုးပြန်တင်လိုက်တာအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်..... ကိုယ်.၇ဲ.အေ၇းကြီးတဲ.ဖိုင်တွေကို partationdမှာသိမ်းထားတယ်ဆို၇င် partitionပိုင်းတဲ.အခါ c:ကိုပဲ format ၇ိုက်ပြီး window တင်ပါလို. အကြံပေးချင်ပါတယ်......................................
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မောင်အာကာကျော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကောင်းပြည့်, tu tu, unique
Find More Posts by မောင်အာကာကျော်
့ဟက်ဒစ် ကို လဲ ကြည့်တာ လဲ မရလို့ပါခင်ဗျာ ဒါပေမယ့် မားသားဘုတ် မှာ တော့ ပင်လေးတွေသုံးချောင်းလောက်ကျိုး နေပါတယ်..... အဲ့ဒါကြောင့် များလားခင်ဗျာ..ပြီးတော့ window7link လေးရှိ ရင် ကူညီပါဦး ခင်ဗျာ....window တင်နည်းလေး ပါ သိပါရစေ ခင်ဗျာ.....CPU ကောင်းမကောင်း ကို လည်း ဘယ်လို သိနိုင်ပါသလဲ ခင်ဗျာ....
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ unique အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
့ဟက်ဒစ် ကို လဲ ကြည့်တာ လဲ မရလို့ပါခင်ဗျာ ဒါပေမယ့် မားသားဘုတ် မှာ တော့ ပင်လေးတွေသုံးချောင်းလောက်ကျိုး နေပါတယ်.....
ဟီး ... ဟီး .... ကြောက်ရှာကြီး
UNIQUE ခင်ဗျာ .... ဘယ်ပင်တွေများ ကျိုးသွားတာပါလိမ့် ....
ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကတော့ Motherboard လို့ပဲပြောရတော့မလို ဖြစ်နေပါပြီ .... ။ မောင်အာကာကျော် ပြောပြသလို CPU ကိုဖြုတ်တဲ့ အချိန်မှာ Motherboard ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို ထိခိုက်မိတယ်လို့ဘဲ ယူဆမိပါတယ် ....။
CPU ကောင်း၊ မကောင်း ကို စမ်းသပ်ချင်ရင် ကိုယ့် CPU နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့(အမျိုးအစားတူတဲ့) ကွန်ပျူတာမှာ ထည့်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ Hard Disk, Memory တို့ကိုလည်း ကိုယ့်အမျိုးအစားနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ တစ်ခြား ကွန်ပျူတာ(အကောင်း) တစ်လုံးမှာ စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ် .....။
Windows တင်နည်းတွေကတော့ KznT ရှင်းပြထားသလို Google မှာရှာကြည့်ရင် အများကြီးတွေ့မှာပါ။
(ကွန်ပျူတာ ၏ အစိတ်အပိုင်းများအား ဖြုတ်၊ တပ် လုပ်မည်ဆိုပါက ကျွမ်းကျင်သူများ သတိထားပြီး လုပ်စေချင် သလို ..... မကျွမ်းကျင်သူများ ကျွမ်းကျင်သူကို အကူအညီတောင်းစေချင်ပါတယ် .....)
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ဇာနည်စိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကောင်းပြည့်, ကျော်ကျော်မောင်, အေးချမ်းမောင်မောင်, mmkyioo, PyaitSone, tu tu
How to Maintain Your Hard Disk Drive KznT Hardware များဆိုင်ရာ029-09-2010 05:55 PM
MultiBoot DVD v7.0 Afin 09.01.2010 minthike Applications015-01-2010 07:05 PM